2011-09-11 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
software ​နှင့် ​တစ်​ခြား ​ရှာ​ချင်​တာ​များ​ကို ​ဘယ်​လို ​ခ​ဏ​လေး​နဲ့ ​ရှာ​ရ​မ​လဲ
​ကျွန်​တော့် ​ဝဘ်​ဆိုက်​မှာ ​တင်​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး. ​တစ်​ခြား ​ဆိုက်​တွေ​မှာ ​ရှိ​တာ​တွေ​ကို ​ဘယ်​လို ​ရှာ​လို့​ရ​သ​လဲ google ​က​နေ ​ဘယ်​လို ​ရှာ​ရ​မ​လဲ ​ဆို​တာ​ကို ​ဒီ​နေ့​ည ​ပြော​ပြ​ပါ့​မယ် . ​ရှာ​နည်း​က ​လွယ်​လွယ်​လေး​ပါ . ​ဥ​ပ​မာ​ဗျာ your uninstaller ​ဆို​တဲ့ software ​တစ်​ခု ​ကျွန်​တော့် ​ဝဘ်​ဆိုက်​ထဲ​မှာ ​ရှိ​နေ​တယ် . ​ဘယ်​နေ​ရာ​မှာ ​ရှိ​သ​လဲ​ဆို​တာ ​လိုက်​ရာ​ရ​တော့​မယ် . ​အ​ချိန်​တို​လေး​အ​တွင်း​မှာ ​ရှာ​လို့​ရ​ပါ​တယ် . ​အဲ့​တော့ ​အောက်​က ​နည်း​အ​တိုင်း ​ရှာ​ကြည့်​လိုက်​ပါ .
(၁) www.google.com ​ကို ​ဝင်​လိုက်​ပါ .
(၂) "your uninstaller .nyinaymin.org" ​လို့ google ​က​နေ ​ရိုက်​ပြီး Google search ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ.
(၃) ​အ​ပေါ်​ဆုံး​မှာ ​မိ​မိ​ရှာ​ချင်​တဲ့ link ​ကို ​တွေ့​ရ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ် .
​သ​တိ​ထား​စေ​ချင်​တာ​က "your uninstaller .nyinaymin.org" ​ဆို​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ your uninstaller ​နှင့် .nyinaymin.org ​ဆို​တဲ့ ​ကြား​ထဲ​မှာ space bar ​လေး ​တစ်​ချက် ​ခြား​စေ​ချင်​ပါ​တယ် . ​အဲ့​လို ​ရိုက်​ပြီး​သာ ​ရှာ​ကြည့်​ပါ . ​ကျွန်​တော့် ​ဝဘ်​ဆိုက်​မ​ဟုတ်​ပဲ ​တစ်​ခြား​ဆိုက်​တွေ​လဲ ​ရှာ​ကြည့်​လို့​ရ​ပါ​တယ် . ​ရှေ့​က ​စာ​လုံး​နေ​ရာ​က ​မိ​မိ​ရှာ​ချင်​တဲ့ software ​နာ​မည် ​ပြီး​တော့ space bar ​ပြီး​တော့ ​မိ​မိ​ရှာ​ချင်​တဲ့ ​ဝဘ်​ဆိုက်​နာ​မည် ​အဲ့​လို ​ရှာ​ကြည့်​လိုက်​ပါ . ​ဒါ​က ​အ​လွယ်​ဆုံး​နှင့် ​အ​မြန်​ဆုံး ​ရှာ​နည်း​ပါ. ​အား​လုံး​အ​ဆင်​ပြေ​ကြ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် .
virus ​ကြောင့် ​ပျောက်​သွား​တဲ့ ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​ဘယ်​လို​ပြန်​ယူ​ရ​မ​လဲ
​မေး soe.was.pyi@gmail.comး​အစ်​ကို ​ကျွန်​တော် ​တစ်​ခု​လောက်​သိ​ချင်​လို့.. ​မေး​ခွင့်​ပြု​ပါ... ​ကျွန်​တော် ​သိ​ချင်​တာ ​ကျွန်​တော် ​စက်​က.. Window ​မ​ကျ​ပဲ​နဲ့.. D:/ ​ထဲ​က file ​တွေ ​ပျောက်​ပျောက်​သွား​ပါ​တယ်.. ​အဲ​ဒါ ​ခ​ဏ​ခ​ဏ Window. ​ထိုင်​နေ​ရ​ပါ​တယ်... ​အဲ​ဒါ ​ဘယ်​လို ​လုပ်​ရင် ​အ​ဆင်​ပြေ​မ​လဲ​ဆို​တာ ​သိ​ချင်​ပါ​တယ်. ​ကျွန်​တော်​က mp3 ​သီ​ချင်း​တွေ​ထည့်​ပါ​တယ်.. ​ဆိုင်​မှာ.... stick ​တွေ​ကို virus ​ကာ​ကွယ်​ဖို့... software ​ပေါ့​ပေါ့..​လေး ​တစ်​ခု ​လို​ချင်​ပါ​တယ်.. update ​က​တော့ ​ကျွန်​တော် ​သိပ်​မ​လုပ်​ဖြစ်​ဘူး.. ​အစ်​ကို.​အဲ​ဒါ ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ့် software ​လေး ​တစ်​ခု ​လောက် ​ညွန်​ပေး​နိုင်​မယ်​ဆို​ရင် ​ကူ​ညီ​ပါ ​အစ်​ကို..
​ညီ​လေး​ရေ virus ​ကြောင့်​မို့​လို့ ​ဖိုင်​တွေ hiden ​ဖြစ်​သွား​တာ​ပါ ​မ​ပျောက်​သွား​ပါ​ဘူး ​ကွန်​ပျူ​တာ​ထဲ​မှာ ​ရှိ​နေ​ပါ​တယ်. ​စိတ်​မ​ပူ​ပါ​နဲ့ . ​ပျောက်​သွား​တဲ့​ဖိုင်​တွေ​ကို ​အောက်​က​အ​တိုင်း ​ပြန်​ဖော်​ကြည့်​လိုက်​ပါ. ​အဲ့​လို​ပြန်​ဖော်​လို့ ​မ​ရ​တဲ့​အ​ခါ​ကျ​မှ​သာ ​ခု​တင်​ပေး​လိုက်​တဲ့ software ​နဲ့ ​ပြန်​ယူ​လိုက်​ပါ.
window7​အ​တွက် ​က​တော့ search box ​က​နေ folder options ​လို့​ရိုက်​ထည့်​ပြီး​တော့ ​အ​ပေါ်​ဆုံး​မှာ​ပေါ်​နေ​တဲ့ folder options ​ကို ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ .
folder options >> view >> show hidden file, folder and driver ​ကို ​အ​မှန်​ခြစ်​ပေး​လိုက်​ပါ။
​ပျောက်​နေ​တာ​တွေ ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် .
​ဒု​တိ​ယ​နည်း​က​တော့ ​လွယ်​ပါ​တယ် . ​ခု​တင်​ပေး​လိုက်​တဲ့ Download ​လုပ်​ပြီး ​ဖိုင်​ဖြေ​လိုက်​ပါ. ​ရ​လာ​တဲ့​ဖိုင်​ထဲ​က explorer xp ​ဆို​တဲ့ ​ဖိုင်​လေး​ကို ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ. ​ကို​သိမ်း​ထား​တဲ့ ​ဖိုင်​က ​ဘယ်​ထဲ​မှာ​လဲ C:// ​ထဲ​မှာ​လား D:// ​ထဲ​မှာ​လား ​ဆို​တာ​ကို ​ရွေး​လိုက်​ပါ။ ​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ညာ​ဖက်​အ​ခြမ်း​မှာ hidden file ​တွေ ​ပေး​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် . ​မ​ပေါ်​လာ​ရင်​တော့ ​အောက်​က ​နည်း​နဲ့​မှ ​ရ​ပါ​လိမ့်​မယ်။
​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း ​ကို ​ပျောက်​နေ​တဲ့​ဖိုင်​ကို ​နံ​ပါတ်(၁)​အ​တိုင်း select ​ပေး​ပြီး ​နံ​ပါတ်(၂)​အ​တိုင်း copy to folder ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။ ​ပြီး​တာ​နဲ့ save ​လုပ်​ဖို့ ​တောင်း​ပါ​လိမ့်​မယ် ​အဲ့​အ​ချိန်​မှာ ​ကို​က ​တစ်​နေ​ရာ​ရာ​မှ save ​လုပ်​ပေး​လိုက်​ပါ။ ​ကဲ ​ဒီ​လောက်​ဆို​ရင် ​အ​ဆင်​ပြေ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်။
antivirus ​အ​တွက်​က​တော့ kaspersky internet security 2012 ​ကို ​တင်​လိုက်​ပါ. kaspersky internet security 2012 ​ကို ​ကျွန်​တော် ​ဒီ​နေ့​ည ​တင်​ထား​ပေး​ပါ့​မယ်. ​စောင့်​ပြီး​တော့ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ။ keys ​အ​တွက်​လဲ ​စိတ်​မ​ပူ​ပါ​နဲ့ ​ကျွန်​တော် ​နေ့​တိုင်း ​ထွက်​သ​မျှ keys ​တွေ​ကို update ​လုပ်​ပေး​နေ​ပါ​တယ် . ​ဝယ်​သုံး​စ​ရာ ​မ​လို​ပါ​ဘူး။
Download ifile.it | Download mediafire | Download hotfile | Download zshare | Download ziddu | Download Deposite | Download rapidshare | Download megaupload
software ​နှင့် ​တစ်​ခြား ​ရှာ​ချင်​တာ​များ​ကို ​ဘ...
virus ​ကြောင့် ​ပျောက်​သွား​တဲ့ ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​ဘယ...